रुस विश्वकप : अबको केहिबेरमै उद्घाटन सुरु, नेपालका चार च्यानलबाट खेल हेर्न सकिने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रुस विश्वकप : अबको केहिबेरमै उद्घाटन सुरु, नेपालका चार च्यानलबाट खेल हेर्न सकिने
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप २०१८ को उद्घाटन अबको केहिबेरमै हुँदैछ । नेपालमा चार टेलिभिजन च्यानलबाट विश्वकपमा खेलहरु हेर्न सकिनेछ ।
नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी प्लस, कान्तिपुर टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्ट्स च्यानलबाट नेपाली दर्शकले विश्वकप खेलहरु हेर्न सक्नेछन् । आज उद्घाटन खेलमा आयोजक रुस र साउदी अरेबीया भिड्दैछन् ।
खेलको उद्घाटन रुसको लुजनिकी स्टेडियममा हुनेछ । उद्घाटन खेलमा विश्व चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती रहनेछ । यस पटकको विश्वकप अफिसियल गीत ‘लिभ इट अप’ रहेको छ ।
यस गीतका निर्माता अमेरिकी चर्चित डिजे डिप्लो, अमेरिकी स्टार कलाकार तथा ¥यापर विल स्मीथ, अमेरिकी गायक निकी जाम र अलवानीयाकी गायीका इरा इस्ट्रेफीले आजको उद्घाटनमा विशेष प्रस्तुती दिनेछन् ।
८० हजार दर्शक क्षमता भएको यो लुजनिकी स्टेडियममा ५०० कलाकारले आफ्नो प्रस्तुती दिने छन्। स्टेडियमको सुरक्षार्थ ३० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। लडाकु विमानको एक टुकडी जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
आजको उद्घाटन खेलमा फुटबलका पिता पेलेभने अस्वस्थ भएका कारण उपस्थित नहुने जनाइएको छ ।